Kugadzira - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Makambani ekugadzira anogadzira zvigadzirwa zvikuru anodawo chikuva chekuvaratidza nekugadzira zvinotungamira. Izvi zvinokwanisa kukura zvakanyanya kana vakashandisa internet kuratidza zvigadzirwa zvavo. Izvo zvakakosha kwazvo kuti ivo vagadzire kuvepo kwavo kunzwike kune rakakura rakasiyana revateereri kuburikidza neakasiyana maitiro uye kugona. Isu tinokubatsira iwe kuita izvi.
Chii chatinoita pa NewGenApps ?
Isu tinoshanda nemaindasitiri ekugadzira nekugadzira tsika mapurogiramu ekusimudzira bhizinesi ravo pawebhu, kugadzira uye kuteedzera zvinotungamira, uye kudzikira kutaurirana mutengo, kuwedzera kune ziso rinobata graphic dhizaini. Vagadziri vane hunhu hwebhizinesi kune bhizinesi (B2B) kutengesa izvo zvakasiyana zvakanyanya nekutengesa kune vatengi. Aya mawebhusaiti anoenderana zvakanyanya nezvazviri chaizvo, zviyero, mifananidzo, kugona kwebasa, uye ROI. Mmaindasitiri ekugadzira anhasi achafanira kusiya nzira dzechinyakare dzekushambadzira dzinobuda uye vanozozvifananidza neazvino marongero ekushambadzira anokwezva mhedzisiro yakanaka kubhizinesi ravo. Newgenapps inotarisira zvese izvi zvinodiwa zvinomukirwa dandemutande budiriro kana tsika zveapplication ekugadzira maindasitiri. Kubva pane dhizaini uye kusimudzira kune echinyakare maapplication, SEO, uye zvemagariro midhiya, isu tinokubatsira iwe kambani kusiya makwikwi ayo kumashure kumashure.
Unyanzvi hwedu mukugadzira indasitiri
1. Cloud yakavakirwa masevhisi
2. Tsika Zvigadzirwa zvefoni, uye webhusaiti dhizaini
3. Enterprise kufamba zvingaitwa
4. Kuvandudza Bhizinesi
5. Kuisa marasha nekumisikidza vagadziri uye zvigadzirwa zvavo
6. Gadzira yakawanda yebhizinesi rako kuburikidza
7. SEO, blogging, uye evanhu vezvenhau Marketing
8. Ongorora uye unatsiridze webhusaiti kuti uchengetedze zvemukati zvepawebhu
9. AWS mhinduro